April | 2016 | HimiloNetwork
Zakariya April 26, 2016	Leave a comment 300 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) – Dhibaatooyinkii Sirgaxnaa ee ka dhacay dalka soomaaliya waxa ay mahadhooyin- reebay uur ku taalo iyo ciil uga tageen Mayaaliin qof oo dunida guud keeda saaraan, waxaa dadkaasi ku jiro soomaali ka bugta caloosha la’na meel ay ku uur fiyoowaadaan ama ay kaga bogsadaan dhibaatadda gaartay. Dagaaladda iyo xasilooni la’aanta soomaaliya ay dariska la noqotay waxa ay ...
Caruusad halkii ay guursan laheyd caruuskeeda ku gacan-seyrtay oo guursatay nin kale kadib markii ay ogaatay in caruusku fulin waayay balan ay wada galeen oo ahaa inuu suuli u dhiso.
Zakariya April 24, 2016	Leave a comment 354 Views
Mumbai, India (Himilonews) – Caruusad reer Hindiya ah ayaa joojisay xafladda arooskeeda maalinkii meherka kadib markay ogaatay in caruuskeeda uu ku dhacay inuu u dhiso suuli ama musqul u gaar ah kaas oo uu ka balan-qaaday kahor heshiiska. Kadib joojinta ama ku gacan-seyrista arooskeeda, haweeneydan 25-jirada ah oo kasoo jeeda Lucknow, waxay guursatay nin kale kaas oo u balan-qaaday suuli ...
Zakariya April 24, 2016	Leave a comment 298 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) – Waxaa socota ciyaar kamid ah ciyaaraha kubadda cagta ee laga dheelo qaaradda Yurub; waxaana daawashadeeda kusii jeeda malaayiin qofood oo dunida saaran oo ay kamid yihiin Maxamed Ibrahim Ceyte oo 21-jir ah dhigtana Jaamacad iyo Najiib Xirsi Abdulle oo 19-jir ah kuna jira heerka sare ee dugsiga oo ku wada nool magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. ...
Dhiig-bixinta iyo Keydka Dhiiga lagu dhowraariyo
Zakariya April 24, 2016	Leave a comment 620 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) – Dhiig-bixintu waxay timaadaa marka qofku si mutadawacnimo ah uu u huro inuu ku deeqo dhiigiisa isaga oo taas badalkeeda aan naawileyn inuu wax ku badasho. Keydka bangiyada dhigaguna waxay badanaa qeyb weyn ka qaataan habka ururinta iyo sidoo kale qaabka loo marayo dhiig-bixiska. Maanta dunida horumartay, badi kuwa dhiigga ku deeqa waa mutadawaciin aan lacag lagu ...
Sidee ayuu ku imaan karaa siyaasi leh xirfad hoggaamineed iyo hibo maamul?
Zakariya April 24, 2016	Leave a comment 285 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) – Qof walba oo dhasha wuxuu la dhashaa hibo Eebe gaar uga dhigay oo uu kaga duwanaan karo qof kale. Qofbaa il looga furay farsamada iyo baabuurta: midbaa ka hela wax aqriska iyo cilmi-baarista midna wuxuu jecleystaa inuu socdaalo oo dhulka sahmiyo. Bilashadii diinta Islaamka, marka uu Nabigu rabo inuu howlaha u kala qoondeeyo saxaabadiisa—isaga og kartida ...
Nin lagu qabtay 18-shinbirood oo nool isaga oo ku hoos qarinaya surwaalkiisa dhexdiisa.
Zakariya April 24, 2016	Leave a comment 481 Views
Ho Chin Me, Vietnam (Himilonews) – Nin ayaa loo xiray fal-danbiyeed ah inuu surwaalkiisa kusoo hoos qariyay tiro shibiro ah oo nool isaga oo isku dayaya inuu u qaado dalka kale, sida laga soo xigtay booliska dalka Fitnam. Saraakiisha kastamka eek u sugan gegida caalamiga ah ee magaalada Ho Chi Minh ee dalka Fitnam ayaa xiray ninkan rakaabka ah oo ...
Goob ganacsi: Meel u baahan BILIC iyo BAAYAC qiima-gal noqon kara
Zakariya April 24, 2016	Leave a comment 187 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) – Waxaa jirta maah-maah caan baxday oo Shiinees ah oo tiraahda: haddii aadan aqoonin sida loo dhoolla-caddeeyo ha furanin dukaan ama ganacsi. Taas waa in qofku bartaa sida had iyo jeer loo dhoolla-caddeeyo qaasatan xilliga lagu mashquulsan yahay ganacsiga Ganacsigu, sida caadada ahba, wuxuu ku mira-dhala tayada iib-gal ee adeeggiisa ama agabyadiisa. Marka la arko ganacsi ilaa ...
Zakariya April 24, 2016	Leave a comment 242 Views
Casablanca, Morocco (Himilonews) – Nin reer Morooko ah oo loo sheegay inuu in xaaskiisu ay ku dhimatay shil baabuur ayaa rumeysan waayay inuu dib uga arkay shaashadda fogaan-aragga ama tilifishanka. Abragh Mohamed oo kasoo jeeda Azilal ayaa maleystay inay xaaskiisu ku dhimatay shil baabuur laba sano kahor. Kadib shilka, haweeneyda ayaa loola cararay isbitaalka—halkaas oo dhaqaatiirtu tilmaameen inaysan samata-bixi doonin. ...
Haweeney furtay albaabka degdegga ah ee Diyaaradda looga baxo iyada oo moodaysa midkii Suuliga
Zakariya April 24, 2016	Leave a comment 223 Views
Beijing, China (Himilonews) – Haweeney ayaa la xiray kadib markii sida la sheegay ay furtay albaabka degdegga looga baxo—hadday diyaaradda wax ku dhacaan—iyada oo ku qaladay midka musqusha oo ay soo aaday, sida ay sheegeen booliska wadanka Shiinaha. Dhacdada ayaa timid xilli diyaaraddu ay u darbaneyd inay ka kacdo gegida diyaaradaha ee Chongqing. Haweeneyda ayaa diyaaradda flight-keedu yahay koofurta Shiinaha ...
Zakariya April 14, 2016	Leave a comment 685 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) –Cudurka waa xaalad aan caadi-aheyn oo gaar ah ama isku-dhex-yaaca dhismeed or howleed ee jirka taas oo saameysa qeyb ama dhamaan xubnaha oogada. Cudurku waa xaalad qofna uusan jecleysan inuu maro—hadana lama hurayo in la dhex gudbo. Waana wax la kowsaday uumista uunka oo dhan. Haddii aanu cudurba jirin, lama fahmeen qiimaha caafimaadka. Sidaas darteed, cudurku waa ...
Daawo – Qaab cusub oo timaha loo dabto oo Corona-Virus loo bixiyay!